हरेक दिन २० जना पुरुषसँग …. « Etajakhabar
हरेक दिन २० जना पुरुषसँग ….
महिला बे’चबि’ख’न र वे’श्या’वृ’त्ति समाजको घृ’णि’त सत्य हो जसको बारेमा सबैलाई जानकारी छ तर न कसैले बोल्न चाहन्छ न त सबैमा यसको विरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत छ । आजकाल, बीबीसीले आफ्नो एउटा डकुमेन्ट्री मार्फत इङ्गल्याण्ड वुमन ट्राफिकिंग बीबीसी वृत्तचित्रसँग सम्बन्धित यो घृ’णि’त सत्यलाई उजागर गरेको छ जुन अत्यन्तै स्तब्ध छ। एलिना (नाम परिवर्तन गरिएको) ले आफ्नो जीवनको बारेमा खुलासा गरिन् र कसरी आफूलाई दासको रूपमा यौ’न स’म्बन्ध’का लागि प्रयोग गरिएको थियो र मानिसहरूले यसबाट पैसा कमाउने गरेको बताइन्।
एलिना एक युवती हुन् र उनले बीबीसीसँग खुलेर आफ्नो जीवनको बारेमा छलफल गरिन । एलिनाले बताइन् कि एक व्यक्तिले उनलाई पहिले प्रेमको जालमा फसायो र उनको प्रेमी बनेको थियो। त्यसपछि उनले इलेनालाई बेलायतको वेस्ट मिडल्याण्डको एउटा घरमा ल्याए र ताला लगाए । यो घरमा उनीसँगै थप २ जना महिला बस्दै आएको एलेनले बताइन् । आफूलाई दिनहुँजसो यौ’न दु’व्र्य’वहार हु’ने गरेको उनले सुनाइन् ।
एलिनाका अनुसार उनले हरेक दिन करिब २० जना पुरुषसँग ज’बर्ज’स्ती स’म्ब’न्ध राख्नुपर्थ्यो । धेरै पुरुष ला’गूऔ’ष’धको ल’त’मा आएर ५–६ घण्टा बस्ने गर्थे । यो काममा एलिनाले धेरै पैसा कमाउने गर्दथिन् । द सन वेबसाइटको रिपोर्ट अनुसार एलिना ले १ दिनमा १ लाख वा सोभन्दा बढी रुपैयाँ कमाउने गर्थे तर प्रेमीका नाममा ठगी गर्ने उनको व्यापारीले उनीबाट सबै पैसा चोर्ने गर्थे ।
जब पुलिसले एलिना लाई घरबाट रिहा गरे, उनी धेरै कमजोर र कुपोषित भइन्। उनको शरिरका विभिन्न ठाउँमा चो’टपटक देखिएको छ । कयौं पटक उनका व्यापारीले उनलाई कु’टपि’ट ग’रे’का थिए जसका कारण उनको शरीरमा आन्तरिक र’क्त’स्रा’व हुन थाल्यो । जब डाक्टरले पहिलो पटक एलिना लाई जाँच गरे, उनीहरूले उनलाई बाँच्नको लागि मात्र ४८ घण्टा दिए तर एलिना को जीवन बच्यो। अहिले उनी तस्करलाई प्रकन प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेकी छिन् ।
रिपोर्टका अनुसार बेलायतमा महिलाको त’स्क’री ठूलो मात्रामा भईरहेको छ र यसै कारण हरेक गल्लीमा हरेक इलाकामा मानिसहरु सुनसान घरभित्र वे’श्यावृ’त्तिको व्यवसाय चलाउँछन् । बेलायतमा यो घृ’णि’त व्यापारमा महिलाहरूलाई विभिन्न देशबाट ज’ब’रज’स्ती धकेलिन्छ। डकुमेन्ट्रीका अनुसार अधिकांश महिला बे’चबि’ख’न र वे’श्या’वृत्ति रोमानियामा गरिन्छ र त्यहाँबाट महिलाहरूलाई इङ्गल्याण्ड पठाइन्छ।
वे’श्या’वृ’त्ति इङ्गल्याण्डमा कानुनी अपराध होइन, त्यसैले व्यापारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई महिलाको बयान चाहिन्छ तर ड’र र असहायताका कारण बयान दिँदैनन्, जसका कारण अपराधीहरू भाग्छन् । रिपोर्टका अनुसार अप्रिल २०१८ देखि डिसेम्बर २०२० सम्म ६ हजार महिलालाई यस ज’घ’न्य कार्यका लागि इङ्गल्याण्ड ल्याइएको थियो ।